Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zaseIndiya » I-Indiya ibhabhayisa ngendlela eyoyikisayo kwingcali yezokhenketho
I-India ibhabhayisa okothusayo kuGqirha Ankur Bhatia
I-Indiya iye yanesiganeko sokufa okulusizi kwishishini lokhenketho kwiintsuku nje ezidlulileyo, uninzi lwazo olunokubangelwa yi-COVID-19.
Ukusweleka kwe-coronavirus kutshanje kubandakanya u-Anil Bhandari, uVijay Thakur, kunye no-Rajendera Kumar.
Namhlanje, olo luhlu lokusweleka kweendwendwe luye lwongezwa kwizinto ezithandwa nguGqirha Ankur Bhatia.
Ugqirha Bhatia usweleke eneminyaka engama-48 ubudala kunye nesizathu sokufa kuluhlu lokubanjwa kwentliziyo.
Ugqirha Ankur Bhatia wayengomnye wabantu abafanelekileyo kwishishini, kwaye waba nguvulindlela ekusebenziseni itekhnoloji kubhukisho lweenqwelo moya kunye nolawulo kwisikhululo seenqwelomoya. Ukwahlula phakathi kwiihotele kunye netyathanga laseRoseate eIndiya nakwamanye amazwe. U-Ankur wayebandakanyeka kwimibutho emininzi yokuhamba, apho wenza khona igalelo elibonakalayo.
UGqirha Bhatia wayenguMlawuli oLawulayo Iqela leentaka Esebenza ngokuthe nkqo kwishishini kubandakanya iphiko laseIndiya lenkampani yetekhnoloji yokuhamba yeAmadeus, iinkonzo zokuphatha umhlaba kwisikhululo seenqwelomoya iBWFS, kunye nothotho lweevenkile zeBMW eDelhi phantsi kweBird Automotive.
Njengomlawuli olawulayo, u-Bhatia wadunyiswa ngokukhulisa ukukhula kwamashishini wokubuka iindwendwe kwiQela leNtaka, kubandakanya nokukhulisa uphawu lweRoseate Hotels & Resorts.
Iqela leentaka likhuphe ingxelo lisithi: “Kulusizi olukhulu ukuba sikwazise ngokusweleka ngesiquphe kwesithandwa sethu uGqirha Ankur Bhatia, uMlawuli oLawulayo, iqela leentaka. Ugqirha Bhatia (48) ufumene ukubanjwa kwentliziyo enkulu ngale ntsasa kwaye wanikezela kuyo.
“Asilahlanga nje kuphela yinkokeli yethu, umbono wethu kodwa ilizwe lilahlekelwe ngumntu omangalisayo. Intsapho yakwaBhatia yothuke ngokunzulu kwaye bayakucela ukuba uyihloniphe imfihlo yabo ngeli xesha linzima losizi. ”